Uyibhala njani incwadi | Abadali be-Intanethi
Indlela yokucwangcisa incwadi
Encarni Arcoya | | Ezahlukeneyo
Ihlabathi loncwadi libanzi kwaye, ngokufika kwamaqonga akuvumela ukuba upapashe incwadi ngaphandle kwemali, ababhali baye banda. Nangona kunjalo, ayinguye wonke umntu oyaziyo indlela yokuyila incwadi kwaye idinga izikhokelo, izikhokelo okanye uncedo lwengcali ukuba ibenzele yona.
Kungakhathaliseki ukuba uliphi na iqela, namhlanje siye sagqiba ekubeni sikunike izitshixo ukwenzela ukuba ufunde indlela yokucwangcisa incwadi kwaye wazi into oya kuyidinga, kwaye ukhangele ntoni, ukuze ufumane ifayile egqibeleleyo. , enoba kumatshini wokushicilela okanye elinye lamaqonga okushicilela iincwadi. Masiyenze?
1 Kutheni kubalulekile ukuyila incwadi?
2 Indlela yokucwangcisa incwadi
2.1 Yeyiphi inkqubo enokusetyenziswa ukuyila incwadi
2.2 Ezona zitshixo zibalulekileyo
2.2.1 Uhlobo lwefonti oza kulisebenzisa
2.2.2 imida yephepha
2.2.3 Ukuqala kwesahluko ngasinye
2.2.4 Ulwakhiwo oluza kulandela encwadini
2.2.5 Ukusetyenziswa kwemifanekiso
Kutheni kubalulekile ukuyila incwadi?
Khawucinge ukuba ugqiba ukubhala incwadi yakho. Into eqhelekileyo kukuba uyenzile kwi-A4, oko kukuthi, kubungakanani befolio. Kodwa incwadi ayinabo obo bukhulu (ubuncinci hayi iinoveli). Eyona ikufutshane iya kuba yi-A5.
Ukuguqula nje uxwebhu lube ku-A5 akuzukukunceda kuba… ngaba uye wathathela ingqalelo ukuba incwadi kufuneka ihambe namaphepha ancanyathiselwe kwicala elinye? Mhlawumbi imida abayibekileyo yenza ukuba loo nxalenye itye oonobumba. Okanye awukhange uyithathele ngqalelo imida ephezulu nasezantsi kwaye kukho izivakalisi ezingaveliyo encwadini.
Singasathethi ke ngezihloko zezahluko, ezinokuvela embindini wephepha okanye ekupheleni kwesahluko zize zingaqalisi de zibe kwiphepha elilandelayo.
Zonke ezi nkcukacha zizo ezibonisa ukuba yandlalwe kakuhle, kwaye iyafundeka.
Ngoko ke, ukuchitha ixesha kuyilo kubalulekile. Gcina ukhumbula ukuba oku kuya kuba ngumbono owenzayo kumfundi ekuqaleni, nangaphambi kokuba bangene ebalini. Ukuba ayibekwanga kakuhle, kuya kubonakala ngathi awuyi kuqwalasela iinkcukacha kwaye ingcamango inokudalwa ukuba ibali liya kuba libi.
Ngoku usazi ukubaluleka koyilo, masingene kanye kulo. Kwaye oku kuya kufuneka wazi ukuba kukho izinto ezimbini ezibalulekileyo kulo msebenzi:
Inkqubo oya kuyisebenzisa ukuyila.
Ezinye izitshixo zisesibini ngakumbi, kodwa nganye nganye idibanisa ukufikelela esona siphumo silungileyo. Gcina loo nto engqondweni.
Yeyiphi inkqubo enokusetyenziswa ukuyila incwadi
Siqala ngeprogram. Njengoko usazi, kwaye ukuba besingekakuxeleli, kukho iinkqubo zokuhlela iteksti ezahlukeneyo, kodwa ayizizo zonke ezilawula ukwakheka kwinqanaba elifanayo.
Abanye, njenge-Indesign, baya phambili, bakwazi ukubandakanya imifanekiso, imida, imida, njl. ngendlela yobuchwephesha. Uthetha ukuba yeyona nto ilungileyo? Ewe kwaye hayi.
Eyona nkqubo yoyilo yile oziva ulungile kuyo. Inokuba yi-Indesign, okanye inokuba yinto elula njengeMicrosoft Word.
Unokusebenzisa izixhobo ezikwi-intanethi ukuyenza (nangona singazicebisi kuba oko kubandakanya ukufaka umsebenzi wakho kwi-Intanethi kwaye ungazi ukuba bangenza ntoni ngawo).
Ezona zitshixo zibalulekileyo
Nokuba yeyiphi na inkqubo oyikhethayo, kuyo nayiphi na incwadi kuya kufuneka unikele ingqalelo kwiinkcukacha ezithile. Zezi:
Uhlobo lwefonti oza kulisebenzisa
Oko kukuthi, yeyiphi ifonti oyifunayo kwincwadi yakho. Apha kuya kuxhomekeka kwinqanaba elithile kuhlobo lwencwadi oza kuyicwangcisa kuba incwadi yabantwana ayifani nenoveli yabantu abadala.
Ewe kunjalo, akulunganga ukuba usebenzise iintlobo ezahlukeneyo zeefonti ngaphakathi (nangaphandle, oko kukuthi, umphambili nangemuva). Ubuninzi besithathu bucetyiswa (ezimbini zifanelekile).
Ubusazi na ukuba umda okwiphepha lasekunene awufani nalowo ungasekhohlo? Ukuba ujonga nayiphi na itemplate yoyilo, uya kubona ukuba ngasekunene umda wasekhohlo mkhulu kwaye ngasekhohlo ulungile.
Sicinga ukuba ufumene ingcamango yokuba kutheni kwaye yindlela abayigcina ngayo into yokuba iincwadi, xa zivulwa, zingakwenzi oko 100% kwaye ziqinisekisa ukuba yonke into igxile kakuhle.
Ungalibali phezulu nasezantsi nokuba, ngakumbi ukuba uza kubeka inani lamaphepha okanye iheda. Ekugqibeleni, igama lenoveli kunye/okanye umbhali lidla ngokubekwa.
Ukuqala kwesahluko ngasinye
Oko kukuthi, ukuba ufuna ukuba zonke izahluko zihlale ziqala kwiphepha elifanayo (ngokuqhelekileyo kwiphepha elingaqhelekanga) ngokuqinisekileyo ayisiyiyo yonke isiphelo sezahluko esiphela kakuhle ukuze esilandelayo siqale entsha, akunjalo?
Oko kuthetha ukuba kufuneka wenze ikhefu lephepha kodwa, xa uyenzile, amanani aya kuphuma kwelo phepha lingenanto, kwaye yinto ekufuneka isuswe.
Okwangoku, kukho abapapashi kunye neencwadi ezizipapashiweyo ezingakwenzi oku, kwaye izahluko maziqale kwiphepha elitsha kodwa ngaphandle kokunikela ingqwalasela yokuba ingaba yinto engaqhelekanga okanye (oko kukuthi, ngasekhohlo okanye ngasekunene komfundi). (ngaphambili okanye ngasemva kwephepha) Ngaba ingcono okanye imbi, ineenzuzo zayo kunye nokubi, isigqibo sixhomekeke kuwe.
Ulwakhiwo oluza kulandela encwadini
Incwadi inokuqulunqwa kwiphepha ledatha yolwazi (incwadi, i-ISBN, idiphozithi esemthethweni ...) kunye nokuvuma, ukuzinikela, isandulela, izahluko, i-epilogue, i-glossary ... Kwaye nganye nganye yezi nxalenye kufuneka ihambe kakuhle. ibekwe ngaphandle. Enyanisweni, kulandelwa isakhiwo esixhaphakileyo kuzo zonke iincwadi.
Kwaye kufuneka ube nayo loo nto kwincwadi yakho ukuze ibonakale ilungile.
Kukho amaxesha apho, ukubonisa izahluko, imifanekiso ibekwe. Kodwa inokuba yimeko yokuba ixesha litsiba, endaweni yomgca othe tye, nawo unomfanekiso okanye umda.
Ezi kufuneka zifakwe kwaye zilungiswe kwindawo kanye ngendlela eya kuthi ithintelwe ukuba ingashukumi xa olo xwebhu lugcinwa (kuyo nayiphi na ifomathi).
Ukongeza, kufuneka ibe nomgangatho omncinci ukwenzela ukuba, xa kuziwa ekushicileleni, kubonakala kukuhle kwaye kungabi pixelated.
Njengoko ubona, ukubeka incwadi akunzima, nangona kunokuthatha iintsuku ezi-1-2 kwimeko yeencwadi ngaphandle kwemifanekiso; okanye iveki apho unemifanekiso (okanye ngaphezulu). Ngaba ukhe wawenza loo msebenzi? Ngaba uphawula enye into ekufuneka ithathelwe ingqalelo?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » Indlela yokucwangcisa incwadi
Indlela yokwenza i-triptych